Usuku My Pet » Amaqiniso Ugly About Dating Modern
Igcine ukubuyekezwa: uJan. 20 2021 | 2 imiz ufunde
Asivume, asisekho abahlala ol omuhle’ days where love, at first sight, turned into a courtship which led to a happy, umshado long. With the kwentuthuko of technology, ukwesaba ukuzibophezela, kanye nezinga eliphezulu lokungakholwa, dating zanamuhla akulula. Futhi labo abazalwa ngasekupheleni kwekhulu lama-20, thina ikakhulu ukwazi nje kunzima kangakanani dating kungaba.
Umuntu onakekela labo ngaphansi inawo wonke amandla ubuhlobo futhi akekho ofuna ukuba lowo isithakazelo ngoba lokho kuyinto nje abasengozini kakhulu. Ngoba asifuni ukuba avele ayikuthandi, sivame ukuthatha amahora noma ngezinye izikhathi izinsuku imiyalezo emuva. Lezi imidlalo ngokomqondo akuzona fun for ubani.
Amakholi efoni kukhona a art ifomu befa. Ukukhulumisana Iningi Namuhla kwenzeka ngokusebenzisa imiyalezo okuyinto empeleni ifomu engenabuntu kakhulu yokuxhumana.
Planning ahead and setting dates tend to never happen. Ngenxa media social, ezinye izithakazelo romantic, kanye nabangani, nezinsuku bavame ukuba sangaleso more of the mzuzu kuka ucabangisisa kuhlelwe out.
Emabintana like “ake ozithokozisa” futhi “bafuna hang out” is code for “ake ukuhlangana”. Futhi ngenkathi Ingebhe kakhulu ukuthola le miyalezo, zingabantu ngokuvamile indlela ethandwa kakhulu sokumema othile ukuba uchithe isikhathi kulezi zinsuku.
Abanye abantu akasebenzi ubuhlobo, bafuna ukuba ngixhumane. Ngeshwa, isikhathi esiningi lokhu kusho kuze ngemuva iqiniso. Namuhla, ngokwethembeka kakhulu kuyaqabukela esetshenziswa.
Abantu abaningi bayesaba ukuzibophezela okuholela “thina uzixoxela nje” ubudlelwano. Enza lokhu Blur imigqa Not kuphela, but these relationships also tend to never last. Lezi ubudlelwano ilebula-free oftentimes ukuqeda nomunye umuntu ukukopela kodwa kusukela ubuhlobo never esemthethweni ke ukukopela “never kwenzeka ngempela”.
Amabhukhmaki ezokuxhum igcwele izilingo futhi amathuba ukuphambuka. Imiyalezo Private futhi ezicashile ukuvusela abanye imizwa yothando ezifana ukuthanda isithombe ngokuqinisekile kwandisa amathuba for wokukopela. Amabhukhmaki ezokuxhum futhi sikhombisa ongakhetha ukubona ubani omunye Ikhona, akuseyona nje indlela yokuxhumana nomkhaya nabangane. Social Media liyasetshenziswa ukuveza imizwa. Updates Isimo lifake izithombe ngothando, kuyilapho kungenjalo siniphatha ngqo, yindlela entsha yokubonakalisa ones’ imizwa yangempela.
Ngeshwa, Namuhla kunzima kakhulu ukubona omunye umuntu elingasefiwe kwenyusa ngokuphelele. Ngokuvamile, Abantu bayesaba qotho futhi azidele khona ngisho ebuhlotsheni. Lo mbono of kokuba sesabe kuba ngoba bengafuni ukuba kubonakale njengokungathi itholakale too, sikhathazeke ngokweqile, dorky too, nice too, ephephile futhi, hhayi funny ngokwanele, njll. Yini sonke kudingeka bazi ukuthi lapho uthola umuntu ofanelekayo, Base kuyogcwala zonke izici nina.
Okokugcina, any person that you get romantic with will either end up being your life partner or eventually, you will break up – zombili lezi zinto sesabeka. Nakuba ukuphola zanamuhla akusona elula, kuwufanele it in the end. Ngokuba lapho senza sithole ukuthi umuntu ekhethekile, sivame babathanda bonke more njengoba uhambo yokuthola uthando lweqiniso enjalo kuwufanele it.